गोथमको डोनाल लग आवासी ईविल रिबूटमा स्टार गर्न सेट - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार गोथमको डोनाल लग आवासी ईविल रिबूटमा स्टार गर्नका लागि
गोथमको डोनाल लग आवासी ईविल रिबूटमा स्टार गर्नका लागि
by ट्रे हिल्बर्न III नोभेम्बर 5, 2020
द्वारा लिखित ट्रे हिल्बर्न III नोभेम्बर 5, 2020
जोहान्स रोबर्ट्स धेरै तनाव बाहिर नरक निर्देशित Me 47 मीटर तल। यस पटक शार्कमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, रोबर्ट्सले आफ्नो आँखा जोम्बिस र टी-भाइरसमा केन्द्रित गर्नेछन्। हामीसँग अलिकति भए पनि निवास दुष्ट कास्टिंग जानकारी ड्रिप डाउन सुरु। पछिल्लो बिट डेडलाईनले रिपोर्ट गर्दछ Gotham र ब्लेड स्टार, डोनाल लग यसमा सामेल हुन सेट गरिएको छ निवास दुष्ट उत्पादन।
लोगु एक मूल ईरान अनुकूलनमा मुख्य आइरनहरू खेल्न सेट गरियो जुन मूल भिडियो खेल सामग्रीको नजिक छ। यसको मतलब यो राकुन शहरमा तल झर्दै छ र म्यान्सेन र पुलिस स्टेशन जस्तै स्थानीयहरूको मिश्रण हुनेछ। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा, यो निवास दुष्ट रिबूट १ 1998 XNUMX in मा सेट गरिएको छ। त्यसो भए, यसले केहि समय हाम फाल्दै र खेलको वास्तविक रिलीज युगमा फिर्ता जान्छ।
लोगुले एउटा कास्टमा सामेल हुन्छ जसमा काया स्कोडेलेरियो, हन्ना जोन-कामेन, रोबी आमेल, टम हपर, अभान जोगिया र नील म्याकडोनोफ शामिल छन्। स्कोडेलारियोले क्लेयर रेडफिल्ड खेल्ने कामेनको साथ जिल भ्यालेन्टाइन र टम हपरले ठूलो खराब झटका, अल्बर्ट वेस्कर खेल्ने छन्।
कन्स्टान्टिन फिल्मले भिडियो खेलमा आधारित चलचित्र निर्माण गर्दैछ र हामीले यसलाई २०२० सिनेमाघरमा देख्नुपर्दछ।
तपाईं मान्छे यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? निवास दुष्ट मूल खेलबाट स्टोरीप्रति वफादार भइरहेको छ? हामीलाई टिप्पणी सेक्सन मा थाहा दिनुहोस्।
निवासी एभिलको कथा यहाँ पहिलो दुई खेलहरूमा फिर्ता जानको बारे थप पढ्नुहोस्।
क्लेयर रेडफिल्डडोनल लगजिल वेलेंटाइनजोहान्स रोबर्ट्सहवेलीप्रहरी चौकीनिवास दुष्टनिवासी बुद्ध 2
मिक गेरिसको साइको IV: शुरुआतले यसको th० औं वार्षिकोत्सव मनाउँछ
बच्चालाई दुर्व्यवहार गर्ने जाँचमा राख्न एक डिलक्स 'क्र्याम्पस अफ द मन्टल' राख्नुहोस्